🥇 ▷ CD Projekt RED wuxuu dejiyaa taariikhda lagu soo bandhigayo ciyaarta cusub ee Cyberpunk 2077 ✅
CD Projekt RED wuxuu dejiyaa taariikhda lagu soo bandhigayo ciyaarta cusub ee Cyberpunk 2077
Waa wax ay dad badani sugayaan, iyo in kasta oo Gamescom 2019 ay u muuqatay dhacdo wanaagsan in lagu soo bandhigo ciyaarta la cusbooneysiiyay ee Cyberpunk 2077, istuudiyaha Polish ayaa durbadiiba xaqiijiyay inuu sidaas sameyn doono dhacdadaas ka dib. Waxaa lagu qiyaasey in dhacdadani ay dhici doonto usbuucii ugu dambeeyay ee Ogosto iyo hadda, CD Projekt RED ayaa dhigaya taariikhda soo bandhigidda ciyaarta ciyaarta cusub ee Cyberpunk 2077.
Isbedelada lagu sameeyay sanadka oo dhan horumarka ilaa muuqaalka koowaad ee aan soo aragnay waa muhim. Tani waa sababta dhacdadan loogu qaatay soo bandhigitaan cusub. CD Projekt RED ayaa dhigaya taariikhda loo soo bandhigo qaab-cayaareedka cusub ee Cyberpunk 2077, oo la xalliyo Ogosto 30.
Soo socda Isku xirka, oo horseed u ah websaydhka rasmiga ah ee Cyberpunk 2077, daraasadda wuxuu sheegayaa inuu ku jiray dhacdada Cologne iyagoo xiriir la leh bulshada. Bulsho filasho ah oo daahfurka ciyaarta ciyaarta cusub ee Cyberpunk 2077 halkee “Toddobaadka soo socda waxaan soo bandhigi doonnaa baahin aan ku dhawaaqi doonno 15-daqiiqo oo daabacan wixii aan ku soo bandhigi jirnay saxafiyiin iyo cayaartoy kulan ka socday Gamescom. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jiri doona meel wareysi lala yeesho hoggaamiyeyaasha kooxda oo ku dhawaaqi doona faahfaahin cusub oo ku saabsan soo-jeedintan.
Qaadashada tixraac ahaan waxa ay saxafiyiintu u joogaan iyo dadweynaha ka qeyb galaya Ciyaaraha.com 2019 Waxay awood u leeyihiin inay arkaan, waxa innaga sugaya Ogosto 30-keeda ayaa sidaas noqon doona, laakiin si ficil ah ayey u tahay qof walba. In kasta oo markii hore qorshuhu ahaa in la soo bandhigo inta lagu gudajiray PAX, waxaa muuqata in ay go aansadeen in ay ka abuuraan dhacdo u gaar ah Warsaw. Dhacdo u adeegi doonta si loo arko waxa innaga innaga dhacaya Cyberpunk 2077, macluumaad badan oo ku saabsan magaalada iyo suurtagalnimada in taageerayaasha iyo kuwa xiiseynaya ciyaartan ay halkaas ka heli doonaan.
Kumbuyuutarka ‘Cyberpunk 2077’ horumar ma sameeyo, waxay qiimeeyaan oo ay ku jiraan Ciyaaraha Cusub +
Waa run inuu isagu sugayo Cyberpunk 2077 Wali waa waqti dheer, maadaama soo-saaristiisu aan la fileynin ilaa soo socota Abriil 16, 2020. Laakiin hadda, CD Projekt RED wuxuu daaha ka qaaday taariikhda soo bandhigidda ciyaarta cusub ee Cyberpunk 2077 bisha Ogosto 30keedaTan darteed waa inaanan muddo dheer sugin.